I-Sugarlove1 ᐅ Iswekile Momma, uTata kunye neZiza zokuDibana kwabantwana kwi-Intanethi
IiSayithi zokuDibana neSwekile
Fikelela kumaQela e-VIP
Yandisa ukubonakala nge-90%
➤ Joyina i-VIP's!
➤ Joyina iSugarlove1
Ingaba isebenza kanjani!
Yamkela, Ingqondo, uMzimba kunye noMphefumlo!
- khetha isizathu SpammingisazisoIntshutshisoUmxholo ongalunganga / okhubazekileyoUmculiomnye
Yamkela Ingqondo, Umzimba kunye noMphefumlo
➤ Banga umntu ohamba naye umphefumlo!
Umqeqeshi Wakho Wokuthandana noNqondo, uMzimba kunye noMphefumlo iGuarlove1
Funa Amalungiselelo ngokweMigaqo yokuNceda
Sifuna ubudlelwane obulungeleleneyo, ke sinika amalungu ethu indawo esebenzayo ngokupheleleyo kunye nesicelo sokwenza oku. Iiseshoni zethu zoMphefumlo zivumela abantu abanokuba ngabazalanayo ukuba baqonde ngqo kwaye bayeke ukuchitha ixesha. Ibavumela ukuba bachaze kwangoko into abayifunayo, abayifunayo kunye nabalindeleyo kulungiselelo lobudlelwane olusekwe kwiMigaqo yokuXhamla ngokuManyeneyo.
Dibana nee-Singles kwindawo yakho yaseKhaya!
Le ndawo yenye yezona ndawo ezilungileyo zamazwe ngamazwe zokuthandana. Nokuba ufuna iflashe ekhawulezileyo, ukuthandana kwabantu abadala okanye uthando!
Abantu Babuza kwakhona
➤ Uhlawula malini uShukela katata kunye noMama weSwekile?
➤ Wenza ntoni uSugar Daddy kunye noSugar Mama?
➤ Ndiyifumana njani iSugar Daddy kunye neSugar Mama?
➤ Umdala kangakanani uSugar Daddy kunye noMama weSwekile?
➤ Ngaba kulungile ukuba noSugar Daddy kunye noSugar Mama?
➤ Ngaba unokungena eNgxaki yokuba lusana oluneswekile?
➤ Ngaba uninzi lweentsana ezineswekile zihlawulwa njani?
➤ Zifumana malini iintsana eziShukela kwiSuku ngalinye?
➤ Sisiphi isibonelelo endifanele ukusi cela ushukela wosana?
➤ Sisiphi iSibonelelo seVeki esiLungileyo soSana oluShukela?
Thina eSugarlove1 kwiiNdawo zokuDibana kwi-Intanethi zinokukunceda wenze izigqibo ezifanelekileyo nokuba uziva usoyika, uneentloni, udidekile okanye ukoyisisiwe! Uninzi lwabantu alunalo ulwazi lokuba ngoobani abathandanayo, banxibe ntoni, bathenga ntoni kwaye ngoba!
Yenza ubuyise ingqondo yakho kunye nokukhetha kwakho iSugarlove1 ibe ngamava amnandi, akhuselekileyo kwaye aziqinisekisa ngokwenyani.
Ubomi abufezekanga, kodwa iDater yakho ekwi-Intanethi, ushukela wosana, iswekile Umama & iswekile Ingqondo kaTata, uMzimba kunye noMphefumlo kunokuba njalo.
Phinda uchaze uBaba kaShukela, uMama weSwekile kunye namaxabiso eSwekile eSana!
You kufuneka ube nengqondo esulungekileyo yokwenza ibango leswekile yakho ngokusebenzisa iMeetup kunye neHookup yokuDibana neApp / iSiza. Yiyo loo nto khetha umendo wakho ngokuseta kwakhona kwaye uchaze ngokutsha amaxabiso asisiseko.
Yeka ukuGxuma kwaye ujoyine iSugarlove
Ngaba udikwe kukukhangela ii-singles ngaphandle kwempumelelo? Kulungile zama iSugarlove.enye!
Inkangeleko yakho kunye nempahla yokunxiba kunye nendlu yakho, imoto kunye nezinye izinto zexabiso ezibonakalayo zikubiza ngokuba ungumntu ongaphandle kwehlabathi.
Nangona kunjalo, uqinisekile ukuba "umfanekiso" wakho ngoyena ndoqo wakho? Okanye kufuneka utyale imali engqondweni nasemphefumlweni wakho? Fumana uSugar Daddy, uSugar Momma kunye neSwekile Baby Soulmate ukunxibelelana nayo ngencoko yethu yothando lweswekile yengxoxo.
I-Sugarlove®, Umnxibelelanisi womphefumlo # 1!
Okokuqala kwi-Sugar Daddy kunye ne-Sugar Momma ngabazali beShukela abathi kwi-Sugar Dating yendabuko baya kuhlawula iSibonelelo soBantwana ukuze bafumane i-HookUp MeetUp kwaye bagcine isithandwa esincinci kunye nesithandekayo.
Nangona kunjalo, iOrganic Sugarlove® ayikho malunga nesibonelelo seveki okanye senyanga kunye nezinye iimpawu ezingaphezulu, kuba ifuna ukuphinda ichaze iSwear Baby, Momma & Daddy Values.
Oku kubandakanya ukuba uyeke ukhetho lwakho lobuqu, ukuze usete ingqondo yakho. Ngenxa yokuba Ingqondo yakho, uMzimba kunye noMphefumlo yinto ephambili engaphelelanga kumfanekiso onyanzeliswa kuwe ngamajelo eendaba kunye nezinye izinto eziseta umkhwa ezinje ngefashistas njlnjl.
Joyina iSugarlove® Meetup kunye neHookup ekwi-Intanethi iswekile uthando Ukuthandana kweApp / iSiza ngoku
Yenza iprofayili yokuDibana kweSayithi ekwi-Intanethi ebonisa wena kunye nexabiso lakho le "CORE" kunye neminqweno yenyama ekufuneka uhlangane nayo umphefumlo. Khumbula ukubhala inkcazo yenqaku kwicandelo "Malunga Nam", kuba iiSugardater ezinokubakho ziyifunda ngeSugar Momma Chat kunye neSugar Daddy Chat. Umvuzo wakho kunye nezinye izithintelo ezingaphezulu aziseyomfuneko, kuba eyona nto ujolise kuyo ubumbano oluphezulu "lweNgqondo, uMzimba kunye noMoya". Joyina simahla "NGOKU" ngokwenza iakhawunti!
Ubomi abufezekanga, nangona kunjalo iiSugarBabies zakho, iiSugarMommas kunye neSugar Daddies Ingqondo, uMzimba kunye noMphefumlo kunokuba!
I-Sugarlove® yiphayona phakathi kweSayithi yokuDibana ngokuShukela / iiSoftware
Asisahluli isweverlovers kwi-Sugardaddy yesini, i-Sugarmomma yesini okanye i-gay / lesbian Sugarbabe. Kutheni, kuba iSugarlove imalunga nokufumana iSoulmate kuqala nokuphambili, ukuze ingqondo nomzimba zilandele ngendlela esempilweni kunye nezinto eziphilayo. Ukusukela ngoku "ukukhululwa (ngokwesiko) ukuCetyiswa".
ISugarlove ® idibanisa iiSugar Daddy, iiSugar Mommas kunye neentsana eziSwekile ngeeNdawo zokuDibana kwi-Intanethi ngaphandle kokujonga ubudala, imvelaphi kunye nenkcubeko. ISugarlove® yiwebhusayithi / usetyenziso olunemiba emininzi kunye nenjongo yomphefumlo yokuqhagamshela iiSoulmate kwihlabathi elaziwayo nangaphaya.
Iingcebiso ze-6 zeSuarlove®: Ukwabelana ngeNdlela yakho yokuPhila kunye nosapho kunye nabahlobo
Incoko yabantwana eneswekile ebusuku yenza into enje. "Uzifumene phi ezo zihlangu zeChaneli?" okanye ngcono okwangoku, "Uyihlawule njani le bhegi kaLouis Vuiton?" Ngokwesiqhelo, indlela yeswekile yamabhadada ashukela kunye / okanye iimasisi zeswekile azisiyonto onokwazi ukuyifumana ngokwakho!
Ndingumntwana oneswekile ngokuzikhethela ngoko ke ndifumana imibuzo esoloko ijolise kwindlela yam yokuphila ye-Meetup kunye neHookup.
Kwiintsana ezimbalwa zeswekile, mhlawumbi akunzima konke konke ukwabelana neentsapho zabo apho iswekile ivela khona ... nangona kunjalo ukwimeko yam, ukwabelana nabahlobo kunye nosapho kulucelomngeni ekusafuneka uloyisile!
Inye into ukubandakanya abahlobo bakho, enye yintsapho yakho! Kungenxa yoko le nto ndikucebisa ukuba ndiqhekeze umkhenkce nabahlobo bakho kuqala. Nokuba ukhetha ntoni na, nazi iingcebiso ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele:
Xelela kwaye wazi ukuba unguKapteni weShiphu sakho, xa kusiza ukuhlangana kunye nokudibana
Kuya kufuneka ukuba wabelane ngokukhetha kwakho kwindlela yokuphila kunye nabo banokubuza imibuzo efana nabahlobo bakho abasondeleyo kunye nosapho.
Ndiyabheja ukuba ungumntwana oneswekile yabasetyhini kwaye ayingomntu wonke owaziyo ukuba nini umjikelo wakho? Nangona kunjalo, ndiqinisekile izibini zabahlobo bakho ziyayenza kwaye mhlawumbi umama wakho okanye umakhulu! Ngapha koko, ndincoma ukuba ndibacele ukuba bahloniphe izigqibo zakho kunye nokuba ngasese.
Xelela iNyaniso ngaphandle kokuBelana ngeZimfihlo zakho malunga ne Ukudibana kunye nokuKhangela Ukuthandana kweApp / iSiza, kodwa zama ukungaxoki.
Ukuthetha izinto ezinje "Owu, mhlobo wam osenyongweni undithengele lewotshi yegolide" okanye "Ewe, ndikhubekile kula matye kwindawo" yeKings of Bling "AKA Jacob The Jeweler" yindawo ethe tyaba. Kukhokelela kuphela kuphando lwakho.
Ngokwam, ndiyithetha nje njengokuba injalo. Ndiyajola, ndidibana nabantu abathandanayo kunye / okanye abafazi abaqolileyo kwiminyhadala ephezulu nayo yonke into ehlawulelweyo Umzekelo, ukuba bendisiya kwisidlo sangokuhlwa seVIP kunye noMthandi weSwekile katata. Impahla yam, izihlangu, izincedisi njalo njalo ziyahlawulwa kwaye zezam zokugcina.
Ndibaxelele ukuba ezinye zeempahla zivela kwimisitho kwaye ezinye zizipho ezivela kubuhlobo kunye nonxibelelwano. Ukuba kunjalo!
Le yinxalenye elula, kodwa kunokuba nzima ukuyichaza imeko yezemali. Ngelishwa, abanye abantu abasondeleyo kuwe baya kukuhlela njengabakhaphi, kodwa oku kukungazi. Bacinga ngokusisiseko kwaye sonke siyazi ukuba intetho ithi… "Ingqikelelo NguMama Wabo Bonke uF **** Ups"!
Krwela umgca phantsi ukuba unobuhlobo bexesha elide ngokudibana kwiiNdawo zokuBonana kwi-Intanethi kunye nokuhlangana okukhokelela kwiswearlove. Uvelwano ekuncedeni macala kulwalamano. Njengokuba wena nomzali wakho oneswekile niyancedana ukufezekisa iinjongo zenu, eziyi-100% yinyani.
ISugarlover kunye neSugarlovers yeSugarlove ®, ungazikhubekisi xa ufuna iSwear Love Dating App / Indawo!
Ngamanye amaxesha abantu bayala ukuyiqonda nokuba ingenatyala kangakanani na. Abakwazi nje ukunxibelelana nendlela yakho yokuphila kwaye ilungile. Awunako ukubaphumelela bonke.
Njengaku, ukuba abahlobo bakho kunye nosapho abakho nge-100% kuyo, ke kufuneka ukhumbule xa uyonwabisa.
Kum, ndingumfundi osisigxina kunye noshukela. Akukho nto ingako kubazali bam endinexhala lokuba ndiza kuthumela umfanekiso we-iPhone yam entsha nentambo yedayimani. Ndikhathazeke ngakumbi ngabantu abakhawuleza ukugweba.
Indlela yokuhlangana kunye nokuHawuwa kweNdlela yokuShukela eIintsana eziShukela kwiiNdawo zokuDibana kwi-Intanethi
Abantu abambalwa bandazi njengeswekile kwaye uninzi lwabantu njengomfundi ophakathi wekholeji yakho, yiyo loo nto ndiyazingca ngokujongeka njengaye. Ngamaxesha athile kuyakubakho isuntswana lam lokudanyaza iswekile yam, kodwa amaxesha ngamaxesha kunokuba kunjalo, konke kukudibanisa.
Vumela ukuthobeka kube yindawo yakho eqinileyo, ngelixa ugxotha abathandi kunye nabanye abagwebi. Ndikhanyisa nje ngokwaneleyo ukugcina abantu bebuza, kodwa akukho nto ingaphezulu.
Bazise ukuba lolukhetho lwakho ukuhlangana okanye ukuThanda iiSuarlovers ngokuKhangela ukuPhononongwa kweSicelo soShukela
Awufuni ukuba bacinge ukuba uyaxhatshazwa kwi Ukudibana kunye nokuKhangela Ukuthandana kweApp / iSiza. Yenze icace gca ukuba lolu luhambo lwakho kwaye uthatha isigqibo ngokubazisa ukuba unolawulo lwezenzo zakho. Banokukhululeka ngakumbi kukhetho lwakho lobomi.
Baqinisekise ngokhuseleko lwakho
Abahlobo bam kunye nosapho babekhathazekile ngokhuseleko lwam, xa ndidibana kunye nokuXhamla kwi Ukuthandana kweApp / iSiza. Oku kuyaqondakala ngokupheleleyo. Kungenxa yoko le nto ndithatha isilumkiso:
Kwimeko apho into kufanele ukuba ingahambi kakuhle, umntu uhlala eyazi eyona ndawo yam.
Ndinelikhowudi okanye i-emoji ethile endiyithumela kubahlobo nakwintsapho ukuba ndisengozini kwaye bayazi ukubiza amapolisa kwaye babathumele kwindawo yam engasendaweni yam.
Ndine-tracker ye-GPS kwi-smartphone yam, ukuze ndikwazi ukubekwa ngabahlobo kunye nosapho kwanamapolisa kwimizuzu engaphantsi kwesi-2.
Nje ukuba abahlobo bam kunye nosapho bafumanisa ukuba la manyathelo athatyathwe, baziva bekhululekile malunga neswekile yam.
Mandiqukumbele ngokuthi, naluphi na ukhetho lwendlela yokuphila akufuneki luyonwabele ngoxolo. Kutheni, kuba kulula ukuba nezihlobo zakho kunye nosapho ebhodini. Kungenxa yoko le nto kungcono ukuthetha phandle, kuba kuyanceda ukunciphisa abantu obathandayo kwindlela ophila ngayo. Ngokukodwa xa bebuzwa malunga nawe.
Iswekile1 | Iswekile uMama, uTata kunye neeNdawo zokuDibana kwabantwana kwi-Intanethi
Ukudibana ekuhlaleni kunye nokuKhangela kwiSuarma Momma, iiSwekile zoTata kunye neeSayithi zoSana zokuDibana kuBantwana. Esona sicelo siNgcono sothando lweSwekile kunye neeWebhusayithi zoMthandi weSwekile zokuKhangela abathandi beswekile
Isiza sokuthandana noMama weSwekile
Iswekile yokuthandana nomama oneswekile efana neSugarlove1 ithandwa kakhulu phakathi kweeswekile zokuthandana nabantu kwiwebhusayithi kwaye iphakathi kweendawo ezithandwayo zokuthandana neswekile. Zininzi iisayithi zokuthandana zeswekile, kodwa iSugarlove1 ihleli njengeyona # 1 yeyona webhusayithi ifanelekileyo yokufumana iswekile yomama kwaye ibekwa ngokubanzi kuKhangelo lukaGoogle kwiindawo eziphezulu zokuthandana neswekile. Iindawo zokubonana ezikwi-Intanethi zommmies weswekile kulula ukuzifumana kule mihla, nangona kunjalo ezona ndawo zibalaseleyo zeswekile zokuthandana zinzima ukuza!
Isiza sokuDibana noTata
Lumkela iswekile ukuthandana iisayithi ngenxa yokuziphatha okukhohlisayo kwi-intanethi. A lot of scammers abalalele sugar daddy ukuthandana websites befuna iithagethi lula. Ezininzi zala maqhetseba ziya kuzama ukukudibanisa ngemali kwaye zihlala zizenza njengabazali beswekile abafuna ukuchitha imali yabo kumntwana oneswekile. Musa ukuwa ngenxa yoko!
Kuyimfuneko ke ngoko ukuba ufumane ezona ndawo zihle kakhulu zeswekile zokuthandana kwindawo eqinisekisiweyo ebizwa njalo "Iswekile dibana newebhusayithi" ezifana Sugarlove1 okanye SeekingArrangement.com njl Kutheni, kuba Sugar daddy online ukuthandana Opens in a new window sites njengoko kuchaziwe baziwa kakuhle inkonzo umthengi ezibalaseleyo kunye nokhuseleko online!
Iswekile uTata wokuDibana neApp
Esona sithandwa sithandwayo sithandana kakhulu sisandla SeekingArrangement.com, kuba sele zikhankanyiwe kumabonakude wesizwe kwaye ziinkampani zeendaba eziphambili ezifana ne-CNN, Forbes, New York Times, BBC njlnjl. ii -apps zokufumana iswekile katata. Sinikezela ngeqonga elikhethekileyo eliphefumlelwe yi-facebook kwaye ke sikulungele ukuba kwiqela leenkqubo zokuthandana ukufumana ootata beswekile.
A sugar daddy ukuthandana app ezifana Sugarlove1 yenye apps zokusebenza sugar daddy ezimbalwa ezisebenzayo! Kuba zininzi eziphosakeleyo zibizwa ngokuba zezona zilungileyo ukuthandana zokusebenza ukufumana iswekile katata, iSugarlove1 iyazahlula njenge-sugar daddy ekhokelayo yokuhlangana nesicelo sokuthandana esisebenza ngokupheleleyo. Oku kukwathetha ukuba ngalo lonke ixesha ukhubeka "kweyona app ifanelekileyo yokuhlangabezana neswekile katata" kuGoogle Play okanye kwiVenkile yeApple yeApple, kuya kufuneka uyizame ngokwakho emva koko udlulise owakho umgwebo.
IiShukela zooTata abaDibana kwiiNdawo zokuDibana
Ungamfumana njani utata weswekile kwi-Intanethi kunokuba ngumsebenzi onzima. Kungoko kuthintele ukujonga iswekile ekwi-Intanethi kwiindawo ezinomthunzi kwi-Intanethi. Sebenzisa ii -apps eziqinisekisiweyo kuphela zokuhlangabezana neswekile katata kwi-intanethi. I-intanethi kuphela iswekile katata inokuba yinkohliso, kuba awungekhe uxelele ukuba ukwinkqubo yeswekile yokwenyani ngenxa yeeapps ezininzi ezinomthunzi. Ngapha koko yenza "iswekile katata kwindawo yam" ukhangele kwaye ukhethe ezo zingabalulekanga kwaye zifuna indlela yazo. Solely kuba yeyona ndlela ingcono yokuzikhusela ngokuchasene nabenzi bobubi kwi-sugar daddy online ukuthandana.
Iswekile Ukuthandana App
Ezonaapps zilungileyo kwiintsana ezineswekile zifumaneka kwiiVenkile ze App, nangona kunjalo iSugarlove1 yeyona app iswekile yomntwana eyaziwayo. Yeyona sikhula ngokukhawuleza kakhulu usana ukuthandana app. Sinelona nani likhulu lamalungu ahlawulweyo / aqinisekisiweyo kwiiswekile zethu zokuthandana app.
Iswekile yokuDibana neWebhusayithi
Ngamawaka eeswekile iintsana ukuthandana iwebhusayithi, iswekile usana kwi-intanethi ukuthandana sele kwaziwa kakhulu. Phakathi kweewebhusayithi ezininzi ezisemgangathweni zokuba lusana oluneswekile, siphezulu. Kwaye neentsana ezingama-30.000 zeswekile kwigama lethu, iSugarlove1 yenye yezona ndawo zintle zeswekile zokuthandana kwiwebhusayithi.
Iswekile Ukuthandana kwiNdawo kwiiNdawo
Ungu ujonge iisayithi zomntwana oneswekile aziwa njenge okanye adweliswe njengeyona webhusayithi iswekile yabantwana? Kulungile ufike kwindawo elungileyo yeswekile yomntwana kwi-intanethi. Iswekile ukuthandana komntwana yi-forté yethu, kuba senze lula ukufumana ushukela wosana. Sinento yokukhangela "iswekile yomntwana" eyaziwa ngokuba yi "sugar baby finder". Ushukela usana olufunwayo lokuthandana luqinisekisiwe ukuba luya kufumaneka kwindawo yethu.
I-Sugarparents yaziwa ngokubuza ukuba "fumana usana lwam oluneswekile" kwaye sihlala sibanceda ekufumaneni iswekile yeswekile ehambelana nayo. Isiza esineentsana eziphezulu zeswekile ngokwesiqhelo azenzi njalo. I-Sugardaddies kunye ne-Sugarmommas zihlala zishiywa zodwa xa zifuna umntwana oneswekile kwi-Intanethi. Fumana umntwana oneswekile kufutshane nam uhlala ecelwa ukuba axhase amaqela ngaphandle kwempendulo. Kungenxa yoko le nto kufuneka usikhethe njengoko ukhetha iqonga leswekile yokuthandana nomama. Sidweliswe kwi-Intanethi njengenye yewebhusayithi ehamba phambili yeswekile.
Ukufumana iswekile momma kufutshane nam ngeswekile yomama yokufumana iswekile yomama ukuthandana iisayithi ngumbono ombi. Cacisa kwaye ukhethe iisayithi zeeshukela momma ezineswekile ekufuneni iswekile. Sukuzimisela kwaye uthumele "iswekile yomama iyafuneka", "ndifuna iswekile momma" okanye "undifunele iswekile momma" kwiwebhusayithi yethu okanye kwiapp. Indawo efanelekileyo yokufumana iswekile okanye ukuba ngqo "indlela" kukubhala umyalezo wobuqu kwaye uqalise incoko yabucala.
I-sugarbabe yakha yathumela "ndifuna iswekile momma", kuba andifumani shukela momma kufutshane nam. Ndifuna iswekile momma ngoku! Ngethamsanqa siyeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana iswekile yomama, kuba siyabongwa njengeyona webhusayithi ilungileyo yeswekile. Amaqela ethu eswekile ngothando zezona ndlela zokufumana iswekile yomama nangona. Ukukhangela kwethu kubonelela ngokukhuselekileyo nangokwasekhaya ukuthandana nomama. Ukwenza "i-mommas yeswekile yendawo" ibinzana eliphandwe kakhulu. Fumana i-momma yeswekile ngokubhalisa kwaye awuyi kufuna ezona ndawo zilungileyo zokufumana iswekile yomama ngaphandle kweqonga lethu lokuthandana kwi-Intanethi.
Iiwebhsayithi zikashukela zinomdla kakhulu kubafazi abancinci abafuna amadoda aqolileyo. Yiyo loo nto iisayithi zeswekile ezinje ngezi zethu ziyindawo apho ibhinqa eliselula linokuthi ndifumene ushukela katata wam. Iinkcukacha-manani zibonisa ukuba amazwe e-3 ehlabathi ziinkokheli malunga nokuthandana kukashukela. Kodwa kunqabile ukuba babeneewebhusayithi zeswekile ezilungileyo. Ukuba ujonge iswekile katata ke indawo yesuropian yeswekile yokuthandana zezona ndawo zibalaseleyo.
Amabinzana afana nala athi "i need a sugar daddy" okanye "get a sugar daddy" awacetyiswa xa kukhangelwa iswekile etyebileyo okanye "undifunele iswekile". Utata weswekile yokwenene uyabanjwa, ke musa ukulonakalisa uphando lwakho ngokuthumela ngokungxama ndifuna iswekile. Endaweni yokusebenzisa iisayithi zikashukela eziphezulu ukunxibelelana ngasese nendoda / okanye umfazi okhulileyo.
Siphakathi kweewebhusayithi zikashukela ezikhuselekileyo, ikakhulu ngenxa yenkonzo yethu yokuncokola yasimahla kunye neempawu zokhuselo. Oko kundikhokelela ekubeni ndikhankanye ukuba ezi zinto zinokhuseleko simahla kwiincoko zikwasibeka phakathi kweewebhusayithi zeswekile eziphezulu. Ngokuncokola nge-Intanethi ungathumela isicelo kwiqela lenkxaso ngalo myalezo ulandelayo "fumana ushukela wam". Eyona ndlela yokufumana iswekile katata nangona kungokubhaliselwa okuhlawulelweyo. Uninzi lweeswekile zikatata zasekhaya kunye neesayithi zikashukela zeswekile ezixhasa ukubhaliswa. Xa usenza uphando, thintela izivakalisi ezineempazamo ezinje nge "looking sugar daddy". Endaweni yoko zama "ukujonga iSugar Daddy"!
Iswekile yoMama kwiindawo zokuDibana kwi-Intanethi
Indawo yaseNigeria yeswekile yomama ayisoloko iyindawo yokufumana iswekile mummy kwi-intanethi. Nangona kunjalo i-Sugar Love App yeyona ndawo iswekile yokuthandana nabantu abanesifo esithi "Ndidinga ushukela ongumama ngoku". Siyayihlonipha iswekile yomama ukuthandana yiyo loo nto sinikezela ngewebhusayithi yeswekile yomama weprimiyamu ukuze ufumane iswekile.
Ukukhangela kwe-algorithms kukufumanela ushukela ongumama okufutshane ukuba ufuna iswekile yomama. Ukuhlangana kunye nokudibana nomama oneswekile ngeqonga lethu lokuthandana elikwi-intanethi, ukuba ufuna umama oneswekile. Uphando lwethu lukuvumela ukuba ukope uncamathisele "ufumane iswekile yomama kufutshane nam", "uswekile ongumama we-intanethi ngoku" kwaye "ufumane iswekile yomama kwi-Intanethi" ngaphandle kwengxaki.
An online ukuthandana app ezifana iswekile lover yenye yezona ukuthandana apps kwaye ngokuqinisekileyo phakathi ethandwa ukuthandana apps. Ukuba ujonge iinkqubo ezilungileyo zokuthandana hayi nje ukuthandwa ziapps! Ke siphakathi kwezona zixhobo zibalaseleyo zokuthandana kwi-Intanethi. Sikwabhiyozelwa kwaye sidweliswe phakathi kwezinye ezona zibalaseleyo zokuthandana kwabasetyhini. Njengoko app ukuthandana lendawo ngaphandle kokuba ukuthandana app kwaye esetyenziswa kakhulu jikelele, sikwajongwa phezulu isicelo online ukuthandana. Ukuphonononga kwethu kuyazithetha!
Sakhe iiwebhusayithi ezininzi zokuthandana kule minyaka idlulileyo, kodwa phakathi kwezi ndawo zokuthandana kwi-Intanethi sikhethe iSugarlove1 njengenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuthandana. Ke ukuba ukhangela eyona webhusayithi yokuthandana uphendlo lwakho luphela apha. Iindawo zokuthandana zasekhaya zezona ndawo zibalaseleyo zokuthandana kwi-Intanethi, kuba bambalwa kakhulu abantu abafuna amalungiselelo aphesheya.
Njengendawo yokudibanisa sihlala sikhuphisana nezinye iiwebhusayithi. Kwiimeko ezininzi iisayithi zokungena kwi-Intanethi azinanto kuthi. Silawula imarike, kuba sithathwa njengezona ndawo zibalaseleyo zokuxhuma. Yenza "ezona ndawo zintle zokungena kwiwebhusayithi" kuGoogle kwaye uya kufumana uluhlu olunezona ndawo zingcono zokungena kwi-Intanethi. Kolo luhlu kuya kufuneka ukuba usifumane kunye nezinye iisayithi zokuloba zasekhaya.
Sisisicelo sokungena kwi-Intanethi kwaye kululuhlu lweeapps ezilungileyo kakhulu kwihlabathi liphela. Njengenkokeli phakathi kwezonaapps zithandwa kakhulu, sesona sicelo sokusetyenziswa kakhulu. Sikunikeza indawo ekhuselekileyo kwi-intanethi yokungena kwi-intanethi. Yeka ukukhangela ii -apps ezilungileyo okanye ii -apps ezithandwayo, kuba sele usifumene ngokufunda le posi. Gcina ukhumbula ezonaapps zibalaseleyo kwi-Intanethi ayizizo ezona zixhobo zibalaseleyo zokuba ngabafazi. Siyakuthembisa ukuba usetyenziso lwethu lwasekhaya lokungena.
Ngenisa ngokutsha yakho
Khangela le bhokisi ukuba uqinisekise ukuba ngabantu.
Yenza kwakhona eyakho
ISugarlove.one indidibanise neswekile katata wam. Eyona nkonzo igqwesileyo
Njengeminye imihla, ukuthandana kwabantu besini esinye kufuna intwana yokunika kwaye uthathe
byUHans Simtanda Caspersen onIswekilelove®,
Yithande le bhlog. Ukubalasela ngokubalaseleyo
Amalungu omhla womlenze kumaQela e-VIP!
LUMKA: Iiprofayili ezingenasentla Amalungu e-VIP ibheji ayiqinisekiswanga kwaye mhlawumbi ayilunganga!
➤ Joyina iBhlog
Incoko yasimahla kunye noMyalezo!
Sithathe isigqibo sokukunika simahla ➤ Ncokola kunye noMthunywa wangasese kwakhona. Sifumene ukuba ungasebenzisa nje ibhloko / iqhosha leNgxelo, Ukuba umsebenzisi ukuthumelela ugaxekile okanye uzama ukukudibanisa!
➤ Ukuncokola simahla ngoku!
Joyina amaqela ethu eSuarlove1 kunye neNgxoxo okanye Thumela i-WhatsApp yakho ukuze uqhakamshelane!
➤ Joyina Amaqela!
Nxibelelana nathi | Vula i-24/7
Ingqondo, uMzimba kunye noMphefumlo
Umama weeNkemba iTarot
Isibonelelo Sabantwana esineShukela